गर्भवतीको पेटमा बच्चा चल्न छोडेपछि अप्रेशन गरेर निकाल्न सफल - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ०३, २०७६ समय: १३:५१:३७
उदयपुर / उदयपुरमा एक गर्भवति महिलाको पेट भित्रको बच्चा चल्न छोडेपछि अप्रेशन गरेर निकालिएको छ । त्रियुगा नगरपालिका १० करमगाछीको २० वर्षिय आशा राईकी गर्भमा रहेको बच्चा चल्न छोडेपछि गाईघाट सिभिल हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टरले वैशाख २९ गते अप्रेशन गरेर निकालेका छन् ।
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. अजिजको टोलीले गर्भवति महिलाको पेटमा चल्न छोडेको ३ किलो ५ सय ग्रामको बच्चाको अप्रेशन गरेर निकाल्न सफल भएको हो । जिल्ला अस्पतालमा पटक पटक चेक जाँच गराएकी गर्भवति महिलाको समय भन्दा १० दिनपछि गर्भमा रहेको बच्चा निकालिएको डा. अजिजले बताए । ‘बच्चा चल्न छोडी सकेको र पानी पनि पुरै सुकेर न्यून भैसकेको थियो, यो एक दमै जटिल केश भैसकेको थियो ।’ डा. अजिजले भने, ‘गर्भवतिलाई सामान्य बेथा लागेको र बच्चाले दिसा समेत खाईसकेको अवस्थामा हस्पिटलमा ल्याएको थियो । भिडियो एक्सरेमा गर्भमा बच्चा चल्न छोडिसकेको पाइएपछि हतार हतार अप्रेशन गरेर निकाल्नु परेको हो ।’ डा. अजिजका अनुसार बच्चा छोरी जन्माईन, बच्चाको र आमाको अवस्था अहिले सामान्य छ । कुनै किसिमको समस्या नरहेकोले एक दुई दिन भित्रै आमा र बच्चालाई डिसचार्ज गर्ने बताए ।
यस्तै नवजात शिशुका बुबा विधु कुमार राईका अनुसार जिल्ला अस्पतालले वैशाख १९ गतेसम्मको प्रसुति गराउने समय दिएको थियो । वैशाख २१ गते जिल्ला अस्पतालमा चेक जाँच गराउन जाँदा पनि आतिपु पर्दै भन्दै घर पठाएको थियो । २८ गते सामान्य बेथा लाग्यो र २८ गते राति १२ बजे जिल्ला अस्पताल लिएर जाँदा बाहिर लैजानु पर्ने भन्दै बाहिर पठायो । तर, आफुसँग पैसा नभएपछि गाईघाट सिभिल हस्पिटल लिएर आएको नवजात शिशुका बुवा राईले बताए । गाईघाट सिभिल हस्पिटलमा ल्याएर भिडियो एक्सरे गरेर हेर्दा बच्चाले दिसा खाएर चल्न छोडे जस्तो भएकोले हतार हतार अप्रेशन गरेर निकाल्नु परेको बताए । उनका अनुसार अस्पताल ल्याउन केही समय ढिलो भएको भए आमा र बच्चाको समेत ज्यान खतरा हुन्थ्यो । उनले भने, ‘भिडियो एक्सरेमा समेत बच्चा चल्न छोडेपछि मलाई डर लागेर आयो । अव के हुने भनेर ? धन्न सुविधा सम्पन्न अस्पताल गाईघाटमै खुलेकोले बच्चा र आमा बाच्न सफल भयो ।’ उनका अनुसार आफुसँगै पैसा नभएकोले अहिलेसम्म अस्पताललाई पैसा तिरेको छैन् । उनले भने, ‘बाहिर लिएर जाँदा पैसाको टुङ्गो नहुँदा मेरो श्रीमति र बच्चाको कुनै ग्यारेन्टी थिएन् । तर, जिल्लामै सुविधा सम्पन्न अस्पताल हुँदा आमा र छोरीको अवस्था ठिक छ ।’
अस्पतालको चार्ज पनि महंगो हुने थियो । एम्बुलेन्स भाडा, खाना खर्च लगायतको खर्च बढी हुन्थ्यो, सुविधा सम्पन्न अस्पताल गाईघाटमै खुलेकोले यस्ता खर्चको समेत बचत भएको उनले बताए । उनले भने, जिल्ला बाहिर लिएर जाँदा एम्बुलेन्सको भाडा समेत मसँग थिएन तर, बुझदै जाँदा यस अस्पतालमा लिएर आएको हुँ ।’
यस्तै ट्रमा सेन्टरका संचालक संजय कुमार शाहका अनुसार अप्रेशन चार्ज, औषधि चार्ज, बेड चार्ज सवै मिलाएर २५ हजारमै प्रसुति गराएको बताए । उनका अनुसार पैसा नभएको अवस्थामा विधु कुमार राईको बच्चा र श्रीमतिलाई बचाईयो । उनले भने, ‘यो हस्पिटल मान्छेले भने जस्तो महंगो नभएको, विराटनगर, धरान भन्दा सस्तो सेवा दिईरहेका छौं ।’